Jery todika 2017 : voasakana ny hetsika an-dalambe | NewsMada
Jery todika 2017 : voasakana ny hetsika an-dalambe
Par Taratra sur 03/01/2018
Toy ny fanakanana tamin’ny fomba rehetra ny hetsika nokasain’ny Mitsangana ry Malagasy, taona 2016, ohatra, nitohy hatrany ny famotehana ankaranany izay mitady hanao hetsika an-dalambe rehetra.
Na ny fametrahana fehezam-boninkazo fahatsiarovana ny 29 marsa 1947 teny amin’ny tsangambato, Ambohijatovo, aza, ohatra, nasian’ny fitondrana fepetra tsy hisian’ny fahalalahana tanteraka ho an’ny rehetra. Toy izany ny fahatsiarovana ny 13 mey teny Analakely.
Tsy afa-nanoatra ny antoko Tim
Tsy tanteraka ny hetsiky ny antoko Tim teny amin’ny kianjaben’i Mahamasina, ny 8 jolay, ho fankalazana ny faha-15 taona niorenany. Voatemitra mpitandro filaminana vao maraina izany.
Noho izay, nafindran’ny antoko teny amin’ny Carlton, Anosy, ny lanonam-pankalazana. Vokany, nidina an-dalambe ho azy ireo mpanotrona ny filoha teo aloha sady filohan’ny Tim, Ravalomanana. Tamin’izany, nisy ny fanaparitahan’ny mpitandro filaminana azy ireo teo Anakakely.
Nilaza hitory ny préfet de Police ny Tim, satria efa nahazoana alalana ny hetsika ary mbola namoahan’ny fitsarana didy, ka tokony ho naato aloha ny fandrarana ny fanaovana izany. Tsy hita mazava izay tohin’ny raharaha taty aoriana.
Nandamoka ny fikirizan’ny Herin’ny fanovana
Nikasa hanao famoriam-bahoaka teny amin’ny kianja mitafon’i Mahamasina, ny 22 sy 23 ary ny 25 sy 26 aogositra, ny Herin’ny fanovana, notarihin’ny Dinika ho fanavotam-pirenena (DFP), nilaza fa hisy izany avokoa ny renivohi-paritany sy ireo distrika lehibe.
Namantohana ny hetsika ny lohahevitra hoe: « Ny fampiasana ny zo sy ny fahafahan’ny vahoaka eto Madagasikara ». Nahazoan-dalana tamin’ny kaominina Antananarivo Renivohitra ny hetsika. Noho ny tsy maha ara-dalàna ny fijoroan’ny Herin’ny fanovana no hoe tsy hahazoany manao famoriam-bahoaka. Tsy hita mazava koa izay tohiny sy farany.
Araka izany, tsy mahita ravin’avaratra firy ny mpanohitra. Tsy azony na eo amin’ny sehatry ny ara-dalàna eny anivon’ny Antenimierampirenena, izay ananany toeran’ny fioha lefitra iray, aza. Vao mainka amin’ny sehatra an-kianja sy an-dalambe mivantana… Kely hery manoloana ny herim-pamoretan’ny fitondrana sa tsy atokisan’ny vahoaka?